Koowheel बिजुली स्कूटर पर्यावरण-सुरक्षा जागरूकता प्रचार - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
Koowheel बिजुली स्कूटर पर्यावरण-सुरक्षा जागरूकता प्रचार
धेरै प्रसिद्ध हो hoverboard स्कूटर ब्रान्ड , Koowheel को रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ छ शीर्ष दस स्मार्ट स्कूटर ब्रान्ड धेरै वर्ष को लागि? आफ्नो Google ब्राउजर खोल्न, र त्यसपछि कृपया किवर्ड "खोज ब्यालेन्स स्कूटर आपूर्तिकर्ता ", फेला पहिलो पृष्ठमा www.koowheel.com डोमेन नाम।
बीस-प्रथम शताब्दीमा, यो मात्र स्थिर, यो तेजी परिवर्तन युग मा, fittest कथा को अस्तित्व हरेक दिन मंचन छ परिवर्तन हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ। व्यापार संसारमा, मात्र पछि यो मृत्यु, उद्यमी अधिक शक्तिशाली र अधिक चिरस्थायी जाँगरको बनाउन क्रममा मात्र लगातार नवीनता अर्थ, कुटपिट मतलब। चीनको बिजुली वाहन उद्योग विकास बीस वर्षभन्दा अनुभव छ, प्रतियोगिता सेतो तातो चरण प्रवेश गरेको छ।
Koowheel पहिलो व्यावसायिक रूपमा स्मार्ट स्कूटर ब्रान्ड , सधैं भीषण नवीनता लागि ज्ञात गरिएको छ, शुल्क मा व्यक्ति उद्यम नवीन छैन कि, कुनै विकास छ भन्नुभयो। र नवीनता छैन केवल प्राविधिक स्तर मा रहन सक्छ, तर पनि व्यापार मोडेल प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, तर पनि उपभोक्ता गरेको उपभोक्ता अनुभव ध्यान केन्द्रित गर्न।
सबैसँग, कोडाक फिलिम, नोकिया मोबाइल फोन थाह रूपमा, तिनीहरूले एक व्यापार साम्राज्य थिए, तर अब, एक बिन्दु delisting सामना गर्न एक दिवालियापन कम। आफ्नो विफलता कारण त्यहाँ उद्यम खडा कुनै नवीनता जाँगरको छ, धेरै सरल छ। डिजिटल युग तिनीहरू अझै पनि विगतका सम्मान आनन्द उठाइरहेका छौं, स्मार्ट टच स्क्रिन मोबाइल फोन आइपुगेको छ, आएको छ, राम्रो उपभोक्ता अनुभव प्रदान गर्न, नयाँ युग गर्न अनुकूल गर्न सक्दैन।
नयाँ युग को आवश्यकता आइपर्दा बिजुली ब्यालेन्स स्कूटर कम्पनीहरु एक कुशल पानी उपचार प्रभाव सिर्जना गर्न मात्र होइन, तर पनि राम्रो जीवन सिर्जना गर्न मानव जीवित वातावरण संग संयुक्त फैशन को तत्व, ध्यान,। वर्तमान मा, Koowheel बिजुली ब्यालेन्स स्कूटर leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
साथै, सबै भन्दा कम्पनीहरु अवस्थित उत्पादनहरु सजग नवीनता को आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भएको छ उपभोक्ता सजग छन्। यो नवीनता महत्त्वपूर्ण छ, तर सीमा कम, वैकल्पिक लाभ र सीमित को स्थिरता ल्याउन सक्छ, अपेक्षाकृत बलियो छ। तसर्थ, ब्यालेन्स पाङ्ग्रा स्कूटर उद्यम उपभोक्ताहरु को सम्भावित माग अनुसार नवीनता मा बोक्न गर्नुपर्छ, बजार को नयाँ प्रेमीका बन्ने, बेबदल अत्यन्तै सजिलो बाहिर यस्तो नवीन उत्पादनहरु।
यो युग उपभोक्ता मांग, उपभोक्ता मांग उत्पादन भविष्य निर्धारण निर्धारण गर्छ। बिजुली ब्यालेन्स स्कूटर को अवधारणा को युग मा, Koowheel बिजुली ब्यालेन्स स्कूटर "कम कार्बन पर्यावरण संरक्षण, हरियो यात्रा" विशेषताहरु उत्पादन, असीमित को सम्भावित निरपेक्ष फाइदा कब्जा गर्न।